Goobjoogayaal Carbeed oo kormeeri doona cod-bixinta Doorashooyinka Somalia. | Baydhabo Online
Goobjoogayaal Carbeed oo kormeeri doona cod-bixinta Doorashooyinka Somalia.
Xoghayaha Guud ee Ururka Jaamacadda Carabta, Dr.Axmed Abuu Qeyd ayaa sheegay inay kordhin dooaan Taageeradda ay Somalia siin doonaan Mustaqbalka soo socda, iyadoo la taaba-gelinayo Qaraarkii laga soo saaray Shir-madaxeedkii Hoggaamiyayaasha Dowladaha Carabta ee ay bishii hore ee July 25-dii ku yeesheen Caasimadda dalka Murutania ee Nawakshoot.
Afhayeenka Abuu Qeyd oo lagu magacaabo Maxamuud Camiiqi ayaa hadalkaasi ka sheegay Shir Jaraa’id oo uu shalay ku qabtay magaalladda Qaahira, kadib, markii uu Xoghayaha Guud ee Ururka Jaamacadda Carabta la kulmay Wakiilka Joogtadda ee Somalia u jooga Xarunta Jaamacadda Carabta, ahna Danjiraha Somalia u jooga dalka msaar, Ambassador C/qaadir Maxamed Wacays.
Danjiraha waxa uu u gudbiyey Dr. Axmed Abuu Qeyd farriin qoraal ah oo uu soo diray Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhinaca kale, Xoghayaha Guud ee Ururka Jaamacadda Carabta, Dr.Axmed Abuu Qeyd waxa uu sheegay inay Goobjoogayaal u soo diri doonaan Somalia si ay u kormeeraan Cod-bixinta Doorashadda Barlamaanka iyo Madaxweynaha cusub ee Somalia oo la filayo in la qabto Bilaha September iyo October ee sannadkan.
Go’aanadii ka soo baxay Shir-madaxeedkii Hoggaamiyayaasha Dowladaha Carabta ee ay bishii hore ku yeesheen Caasimadda dalka Murutania ee Nawakshoot waxaa ka mid ahaa in Somalia la siiyo Taageero Degdeg ah ee dhinacyadda Ammaanka iyo Dib-u-dhiska Hay’addaha Ammaanka, iyadoo Golaha Ammaanka ee QM loogu baaqay in Somalia laga qaado Cunaqabataynta Hubka, si ay Ciiddanka Somalia ugu guuleystaan Hawlgalka ka dhanka ah Xarakadda Alshabaab.